Graphite muforoma Vagadziri & Vatengesi | China Graphite muforoma Fekitori
Graphite muforoma kuenderera vachikanda nonferrous simbi
Mhando iyi yeforoma ine akasiyana maumbirwo egomba rimwe, porous yakakosha chimiro, yekukiya muviri muforoma. Iyi mhando yeforoma inokodzera yakatwasuka inoenderera ichikanda mhangura, aluminium, simbi nesimbi. Ichi chigadzirwa chine yakachena-yakachena graphite chigadzirwa, ine kugadzikana kuita uye yakanaka yekugadzirisa tekinoroji, iyo inoshandiswa zvakanyanya mu metallurgia indasitiri.
Semiconductors zvinhu zvine conductivity pakati pevatungamiriri uye insulators mukamuri tembiricha. Semiconductors anoshandiswa zvakanyanya muredhiyo, terevhizheni uye kuyerwa kwekuyera.
Iko kumanikidza uye kudziyisa kunoitwa nenzira imwecheteyo, uye iyo sinter inokwenenzverwa inogona kuwanikwa mushure menguva pfupi yekukanya, izvo zvinoderedza zvakanyanya mutengo. Pasi pekupisa kwakanyanya uye kumanikidza kwakanyanya, mukana wekushandisa grafiti zvinhu zvine mukana wakasiyana kana uchienzaniswa nezvimwe zvinhu. Nekuti iyo coefficient yekuwedzera mitsara yekugadzira graphite zvinhu zvidiki, chimiro uye saizi kudzikama kwezvigadzirwa zvinogadzirwa nazvo zvakakwirira kwazvo.